တောင် ကိုရီးယား တွင် လူမ သိ သူမ သိ ဗိုင်းရပ်စ် များ လျှို့ဝှက်စွာ ပြန့်နေမှု မှ တွေ့ရှိ ရတဲ့ တုန်လှုပ်ဖွယ် လူနာအရေအတွက် – EverBestMM
တောင် ကိုရီးယား တွင် လူမ သိ သူမ သိ ဗိုင်းရပ်စ် များ လျှို့ဝှက်စွာ ပြန့်နေမှု မှ တွေ့ရှိ ရတဲ့ တုန်လှုပ်ဖွယ် လူနာအရေအတွက်
Ever Y | June 30, 2020 | World News | No Comments
တောင် ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဟာ ကမ္ဘာ့ အလယ် မှာ ချီးကျုးစရာ ကောင်းလောက်အောင် ကိုဗစ် ရောဂါ ကို ထိန်းချုပ် နိုင် ခဲ့တယ် ။ တောင်ကိုရီးယား ကို ဗိုင်းရပ်စ် စဝင်ပြီး ဒီနေ့အထိ (၅) လ အတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ရှိတယ် လို့ တရားဝင် အတည်ပြုထား တဲ့ လူနာ စုစုပေါင်း ( ၁၂,၇၅၇ ) ယောက် ရှိတယ် ။ ဒါပေမဲ့ မနေ့က ဇွန် ( ၂၉ ) ရက် ည ( ၈ ) နာရီ သတင်း ကတော့ တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ် ပါ တယ် ။ လူမသိ သူမသိ ကိုရိုနာ ကူးစက်ခံရပြီးတဲ့ လူမသိသူမသိ ပြန်ကောင်းသွား တဲ့ သူတွေက ၄ ဆရှိနေတယ် ဆိုတာပဲ ။ ဆိုတော့ အားလုံး (၅) သောင်းကျော်ပေါ့..။
ကျန်း မာရေးဌာန က ပြည်သူ ၁၅၀၀ ကို စစ်တမ်း ကောက်ယူပြီး antibody-based test နဲ့ စမ်းကြည့်လို့ရတဲ့ အဖြေဖြစ်တယ်။ လူ ၁၅၀၀ မှာ ၀.၁% က ဗိုင်းရပ်စ်ရပြီးသားသူတွေဖြစ်နေတာ အံ့ဩစွာ သိလိုက်ရ..။ တောင်ကိုရီးယားက လူဦးရေသန်း ၅၀ နဲ့ တွက်ရင် လူ ၅ သောင်းကျော် ဗိုင်းရပ်စ်ရခဲ့ပြီ။ (မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဝင်ခဲ့ဖူးလေသလားသိချင်ရင် antibody-based test လုပ်ရ ပါတယ်)
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အမှန်တကယ်လူနာ အရေအတွက်တွေဟာ စာရင်းအင်းထက် ၄ ဆနီးပါး ပိုမြင့်နေတယ် ဆိုတော့..၊ လူမသိသူမသိ ဗိုင်းရပ်စ်ရသူ ၄၀,၀၀၀ ကျော်ဆီက ဗိုင်းရပ်စ်တွေ လျှို့ဝှက်စွာပြန့်နေတာခဲ့ပေါ့။ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ချီးကျုးစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ တောင်ကိုရီးယားမှာ ရောဂါမသိလိုက်ရတဲ့လူနာတွေ ၄ ဆရှိနေတယ်ဆိုရင်…။ ဒီနေ့ အထိ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း မှာ (၁၀) သန်းကျော်တဲ့..။ အတည်မပြုနိုင်တဲ့၊ စာရင်းအင်းမရှိတဲ့လူနာတွေ အနည်းဆုံး သန်း ၄၀ ကျော်ရှိနေပြီလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ..။
ဒါတောင် တောင်ကိုရီးယားက အခြားနိုင်ငံတွေ နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် အများကြီးတော်သေးတယ်။ အမေရိကန် မှာ ၁၄% (၁၀၀ မှာ ၁၄ ယောက်)၊ ဆွီဒင် ၆.၁% (၁၀၀ မှာ ၆ ယောက်)၊ ပြင်သစ် ၄.၄% (၁၀၀ မှာ ၄ ယောက်) ဆေးပညာ ဂျာနယ်လစ် Cho Dong-chan ကပြောတယ် ။ “ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ပြီး သားသူတွေက ပဋိပစ္စည်းတွေရှိနေတာမို့ အဲဒီလူတွေ ရောဂါထပ် မရတော့ဘူးလို့ တွေးလို့မရပါဘူး။ ဗိုင်းရပ်စ်ထပ်ရတဲ့ လူနာတွေ အများကြီး”
အမေရိကန်မှာ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ၄ သောင်းကျော်နေတာ ၃ ရက်ဆက်တိုက်ရှိပြီ။ အိန္ဒိယလည်း မလွယ်လှပါ ။ ဒီနေ့အထိ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၅၆၂ ၄၅၇ ယောက် ။ တောင်ကိုရီးယားကတော့ တစ်နေ့ ၅၀ ဝန်းကျင် ။ သတိထားရမယ့် အခြေအနေဖြစ် ပါတယ် ။ ဘာတွေထပ် ဖြစ်လာဦးမလဲ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါ။
June 30th, 2020.
တောငျ ကိုရီးယား တှငျ လူမ သိ သူမ သိ ဗိုငျးရပျဈ မြား လြှို့ဝှကျစှာ ပွနျ့နမှေု မှ တှရှေိ့ ရတဲ့ တုနျလှုပျဖှယျ လူနာအရအေတှကျ
တောငျ ကိုရီးယားနိုငျငံ ဟာ ကမ်ဘာ့ အလယျ မှာ ခြီးကြုးစရာ ကောငျးလောကျအောငျ ကိုဗဈ ရောဂါ ကို ထိနျးခြုပျ နိုငျ ခဲ့တယျ ။ တောငျကိုရီးယား ကို ဗိုငျးရပျဈ စဝငျပွီး ဒီနအေ့ထိ (၅) လ အတှငျး ဗိုငျးရပျဈရှိတယျ လို့ တရားဝငျ အတညျပွုထား တဲ့ လူနာ စုစုပေါငျး ( ၁၂,၇၅၇ ) ယောကျ ရှိတယျ ။ ဒါပမေဲ့ မနကေ့ ဇှနျ ( ၂၉ ) ရကျ ည ( ၈ ) နာရီ သတငျး ကတော့ တုနျလှုပျဖှယျဖွဈ ပါ တယျ ။ လူမသိ သူမသိ ကိုရိုနာ ကူးစကျခံရပွီးတဲ့ လူမသိသူမသိ ပွနျကောငျးသှား တဲ့ သူတှကေ ၄ ဆရှိနတေယျ ဆိုတာပဲ ။ ဆိုတော့ အားလုံး (၅) သောငျးကြျောပေါ့..။
ကနျြး မာရေးဌာန က ပွညျသူ ၁၅၀၀ ကို စဈတမျး ကောကျယူပွီး antibody-based test နဲ့ စမျးကွညျ့လို့ရတဲ့ အဖွဖွေဈတယျ။ လူ ၁၅၀၀ မှာ ၀.၁% က ဗိုငျးရပျဈရပွီးသားသူတှဖွေဈနတော အံ့ဩစှာ သိလိုကျရ..။ တောငျကိုရီးယားက လူဦးရသေနျး ၅၀ နဲ့ တှကျရငျ လူ ၅ သောငျးကြျော ဗိုငျးရပျဈရခဲ့ပွီ။ (မိမိ ခန်ဓာကိုယျထဲကို ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ဝငျခဲ့ဖူးလသေလားသိခငျြရငျ antibody-based test လုပျရ ပါတယျ)
တောငျကိုရီးယားရဲ့ အမှနျတကယျလူနာ အရအေတှကျတှဟော စာရငျးအငျးထကျ ၄ ဆနီးပါး ပိုမွငျ့နတေယျ ဆိုတော့..၊ လူမသိသူမသိ ဗိုငျးရပျဈရသူ ၄၀,၀၀၀ ကြျောဆီက ဗိုငျးရပျဈတှေ လြှို့ဝှကျစှာပွနျ့နတောခဲ့ပေါ့။ ကမ်ဘာ့အလယျမှာ ခြီးကြုးစရာကောငျးပါတယျဆိုတဲ့ တောငျကိုရီးယားမှာ ရောဂါမသိလိုကျရတဲ့လူနာတှေ ၄ ဆရှိနတေယျဆိုရငျ…။ ဒီနေ့ အထိ ကမ်ဘာတဈဝနျး မှာ (၁၀) သနျးကြျောတဲ့..။ အတညျမပွုနိုငျတဲ့၊ စာရငျးအငျးမရှိတဲ့လူနာတှေ အနညျးဆုံး သနျး ၄၀ ကြျောရှိနပွေီလားဆိုတာ စဉျးစားစရာပါ..။
ဒါတောငျ တောငျကိုရီးယားက အခွားနိုငျငံတှေ နဲ့နှိုငျးယှဉျရငျ အမြားကွီးတျောသေးတယျ။ အမရေိကနျ မှာ ၁၄% (၁၀၀ မှာ ၁၄ ယောကျ)၊ ဆှီဒငျ ၆.၁% (၁၀၀ မှာ ၆ ယောကျ)၊ ပွငျသဈ ၄.၄% (၁၀၀ မှာ ၄ ယောကျ) ဆေးပညာ ဂြာနယျလဈ Cho Dong-chan ကပွောတယျ ။ “ ဗိုငျးရပျဈဝငျပွီး သားသူတှကေ ပဋိပစ်စညျးတှရှေိနတောမို့ အဲဒီလူတှေ ရောဂါထပျ မရတော့ဘူးလို့ တှေးလို့မရပါဘူး။ ဗိုငျးရပျဈထပျရတဲ့ လူနာတှေ အမြားကွီး”
အမရေိကနျမှာ တဈနေ့ တဈနေ့ ၄ သောငျးကြျောနတော ၃ ရကျဆကျတိုကျရှိပွီ။ အိန်ဒိယလညျး မလှယျလှပါ ။ ဒီနအေ့ထိ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံရသူ စုစုပေါငျး ၅၆၂ ၄၅၇ ယောကျ ။ တောငျကိုရီးယားကတော့ တဈနေ့ ၅၀ ဝနျးကငျြ ။ သတိထားရမယျ့ အခွအေနဖွေဈ ပါတယျ ။ ဘာတှထေပျ ဖွဈလာဦးမလဲ ဘယျသူမှ မသိနိုငျပါ။
မြန်မာ အပါအဝင် နိုင်ငံေ ပါင်း ၁၀၀ ကျော်အ တွက် ကိုဗစ်ကု သဆေး ကို အိန္ဒိယ မှာ ထုတ်မည်
နောက်ဆုံး(၁၀) ရက်အတွင်း တရက်လူ ၁ေ သာင်းနှုန်းဖြင့် လူ ၁ သိ န်းကျော် ကူး စက်ပြီး က မ္ဘာ့တတိ ယ ဖြစ်လာ တဲ့ ရုရှား ရဲ့ နောက်ကွယ်
ဘီလ်ဂိတ် ဟာ ကမ္ဘာ့က ပ်ရော ဂါကြီး ဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း ဘာ့ကြောင့်များ ကြို သိနေခဲ့တာ လဲ?
တရုတ်ဆို တဲ့ အသံ ကို လုံးဝ မကြားချင် ဟု အေ မရိကန်သမ္မတ ထရမ့်ပြော
ချစ် ပရိသတ်တွေ အရမ်းအကျိုးရှိစေမယ့်သတင်းကောင်းလေး ကို ပြောပြလိုက် တဲ့ မေသန်းနု
တင်မားမူမြင့်တက်ေ နစဉ် တရုတ် နယ်စပ်အ နီး စစ်ရေးေ လ့ကျင့်မှုပြုလု ပ်လိုက် တဲ့ အိန္ဒိယ
အိမ်ေ ဆာက်နေတုန်း မှာ အုတ် ခဲတွေ လာတောင်း ရင် မပေး လိုက် ပါနဲ့
ဧရာဝတီ တိုင်း အတွင်း ဝက်အမြောက်အများ သေ ဆုံး ရသည့် အကြောင်း ရင်း ကို ပြောပြီ
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွ က် နေ့သားအ လိုက် (၁)နှစ်စာဟောစာ တမ်းကြီး
အတိုက် အခိုက်တွေများေ နပြီး ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ မျှတ မှု မရှိဖြစ်နေခြင်း တို့အတွ က် ယတြာ